Kungani Ukuhlelwa Kwegama elingukhiye Kungafanele Kube Imethrikhi Yakho Yokusebenza Eyisisekelo | Martech Zone
Kungani Ukusezingeni Lamagama Aphambili Kungafanele Kube Imethrikhi Yakho Yokusebenza Eyisisekelo
NgoMgqibelo, July 28, 2018 NgoMgqibelo, July 28, 2018 UBill Acholla
Esikhathini esingengakanani esidlule, amasu we-SEO abandakanya kakhulu ukuthola isikhundla kumagama angukhiye. Amagama angukhiye kwakuyinto eyinhloko yokukala ukusebenza komkhankaso. Abakhi bewebhusayithi bangafaka lawa masayithi ngamagama asemqoka, futhi amaklayenti angathanda ukubona imiphumela. Imiphumela, nokho, ikhombise isithombe esihlukile.
Uma isifundo sakho se-SEO sabaqalayo sifaka phakathi ukusebenzisa amathuluzi weGoogle ukuthola amagama asemqoka bese uwafaka kuwebhusayithi yonke, kungahle kuhambe ngendlela efanele, kepha kuze kube sezingeni elithile. Esimweni samanje se-SEO, amagama angukhiye angenye yamamethrikhi amaningi aholela ezingeni elingcono lewebhusayithi yakho.
Ekuqaleni, ngizama ukwenza i-SEO ibhulogi yami, ngenza okufanayo, ukugxila igama elingukhiye. Futhi lelo bekungelona ukuphela kwephutha engilenzile eliholele i- Umkhankaso we-SEO ukungabi nalutho. Manje sengicwaninge ngokwanele senginolwazi olwanele lokuhlanganyela ukuqonda kwami ​​nani nonke ukuze ninakekele wonke amaphuzu abalulekile ngaphambi kokuqhubeka ne-SEO yenu.
Ngaphambi kokuqhubeka ngamagama angukhiye, ake siqhubeke, nokuthi usesho lweGoogle lusebenza kanjani. Akufani nakudala lapho i- amazinga aphezulu ku-SERPS kungaba ngenxa yokuthi ukusetshenziswa kwegama elingukhiye noma amabinzana asemqoka, manje, iGoogle ayiklelisi amagama angukhiye. I-Google esikhundleni salokho ihlela imiphumela ngokwezimpendulo, okusho ukuthi, iluphi ulwazi umsebenzisi ayehlose ukulukhipha. Ukufaneleka kwamagama asemqoka ekuseshweni sekuqale ukwehla ngoba amagama angukhiye agcizelela kuphela emagameni abasebenzisi abawasebenzisayo, hhayi bona wayefuna.
I-Google izama ukukunikeza izimpendulo ozifunayo. Okusho ukuthi ikhasi lingahlala linganyakazi Izinga eliphakeme yize igama lokusesha lingatholakali nencazelo yeMeta noma ekhasini. Ngezansi kunesibonelo.
Ungabona ukuthi imiphumela ephezulu ayinayo ngisho nengxenye yamagama kumusho oyisihluthulelo. Ngokufanayo, ekhasini lewebhu lomphumela ophezulu, igama elithi "imvula ” ayikho. Lokhu kusitshela ukuthi ukuhambisana yemiphumela ibaluleke kakhulu kuGoogle kunamagama asemqoka kuphela.
Lokhu futhi kusiletha ezingeni lokuthi amazinga wegama elingukhiye aqinile awasho lutho kumasu wanamuhla we-SEO. Izikhundla zamagama asemqoka ziyingxenye eyodwa yenqubo yokuguqulwa. Nakhu ukuthi kanjani I-Google iyichaza kubhulogi yabo:
Ngakho-ke, ngaphambi kokuthi ungene kwizinga elingukhiye iwebhusayithi yakho kufanele ibhekeke futhi icwebezele. Noma ngabe isiza sakho sesiklelisiwe, sidinga ukwanelisa izinhloso zabasebenzisi ngemuva kosesho futhi sifeze izinhloso zebhizinisi lakho. (Isib. Ukulandwa, ukubhaliswa kwe-imeyili, njll.)
Ingasaphathwa imali engenayo nenzuzo; amagama angukhiye aqinile awasho ukuthi uzoba nawo amanani aphezulu ethrafikhi ephilayo, Ukugcina ngokubuka izizathu ezishiwo ngaphambi nangemva kwebhulogi, kunzima ukusho ukuthi igama elingukhiye lizodonsela engakanani iwebhusayithi yakho. Noma ngabe isihloli sezinga sikhombisa umphumela omuhle, kufanele wazi ukuthi imininingwane yamagama asemqoka owabhekile ayinembile ngokuphelele. Ukuchaza isizathu salokhu, ngingavele ngithathe igama elilodwa ukuphendula, Ukwenza okuthandwa nguwe.
Ake ngikuchazele ukuthi ukwenza ngezifiso kube nomthelela onjani emiphumeleni yokucinga kanye neyokusesha ngendlela yokuthi kunqobe amandla okubaluleka kwamagama asemqoka kuma-rankings emiphumeleni yosesho.
I-Google inemininingwane yethu eminingi, kufaka phakathi umlando wethu wosesho, indawo esikuyo, imininingwane yabantu, idivayisi esiyisebenzisayo noma esiyisebenzisa kakhulu, indlela yethu yokuphequlula, izindawo esikhule kakhulu kuzo kanye neminye imisebenzi eminingi kwamanye amapulatifomu njenge-Youtube.
Ngakho-ke ngokwesibonelo, uma ngifunile isikhungo sokuzivocavoca eNew Jersey, umphumela ophezulu ku-Google yami ukhombisa iwebhusayithi yejimu engivele ngiyivakashele ngaphambili.
Ngokufanayo, uma ngifuna izindawo zokudlela eNewark City ngo-11 ekuseni, abakwaGoogle bazobona njengomuntu osemotweni othola indawo yokudlela azodla isidlo sasemini.
Ngakho-ke, ukuhlunga imiphumela, iGoogle izokhombisa izindawo zokudlela ezivulekile, eziphakela isidlo sasemini, futhi eziphakathi kwendawo yokushayela yendawo yami yamanje njengemiphumela ephezulu.
Lezi izibonelo ezimbili nje; kunezinye izinto eziningana ezitshela ukuthi iGoogle ayisebenzisi kanjani igama elingukhiye ukukala imiphumela.
Ukusesha kuselula kudonsa imiphumela ehlukile ngokuqhathaniswa nalapho usesha kudeskithophu. Ngokufanayo, Izwi le-Google idonsa imiphumela ehlukile ngokuqhathaniswa nemiphumela ye-Google manje. Imiphumela ephezulu nayo iyashintsha uma usebenzisa isiphequluli kumodi yaso ye-incognito.
Ngokufanayo, igama elifanayo lokusesha elifakwe enyakatho yeCalifornia lizodonsa imiphumela ehlukile uma kuqhathaniswa nokuthi ngabe lifakwe eningizimu yeCalifornia.
Njengoba kunikezwe lokho, noma ngabe wena nami besimi eceleni komunye nomunye, imiphumela yethu yosesho isazobukeka yehlukile. Lokhu kungenxa yesizathu esishiwo ngenhla, okungukuthi, ukwenza ngezifiso.
Njengoba ngenzile ekuqaleni, ungahlola nokusebenza komkhankaso wakho ngokusesha amagama angukhiye afanele bese ubona ukuthi wena isikhundla ekhasini lokuqala.
Ngemuva kwalokho uzobuyela emuva emibikweni ukuze ubone ukuthi amazinga aphakeme wamagama wakho okhiye aqondisiwe abanjani.
Sibonile ngenhla ukuthi amagama angukhiye akuyona imethrikhi efanelekile ukwahlulela impumelelo yebhizinisi lakho online. Ngakho-ke yini esingayenza ukwenza isu lethu le-SEO livelele?
Izikhundla Zokusebenza Ziphakeme Kakhulu
Ukusetshenziswa kwamasu wanamuhla kwe-SEO amagama angukhiye omsila omude. Kungani? Benza ikhasi lakho libonakale lihambisana kakhulu nenjini yokusesha yingakho libekwe phezulu kubantu abafanele ezindaweni ezilungile.
Isikhundla samagama akho angukhiye asinandaba, ngoba kunezindlela ezahlukahlukene abantu abasesha ngazo. Futhi, iGoogle ikhombisa imiphumela kulowo nalowo ngokuya ngomlando wabo, indawo, idivayisi, njll.
Ukukhula Kwezinto eziphilayo
Udinga ukuqinisekisa ukuthi inani lezivakashi ezifika ekhasini lakho ngosesho lwezinto eziphilayo likhula nsuku zonke, njalo ngenyanga nonyaka. Udinga futhi ukunakekela ukuthi izivakashi nezivakashi ezintsha zivela ngaphakathi kwemakethe yakho ehlosiwe.
Kufanele ulindele ukuguqulwa okuningi kusuka kubavakashi abafika ngosesho lwe-organic.
Khumbula ukuthi ulwazi lwakho lokusesha alukhombisi imiphumela yosesho lwabathengi bakho abazoba khona. Yingakho kungeyona inkomba yokuphumelela komkhankaso wakho we-SEO futhi ayitsheli ukuthi iwebhusayithi yakho izothola ukuguqulwa okuningi.
Gxila kwimiphumela, inhloso yakho ukuthola ukukhala kwefoni yakho, ukuthola ama-imeyili agcwele amafomu wokuxhumana, noma ithebhu yama-oda akho ukukhombisa ama-oda amasha.
Lapho-ke nguwe kuphela ongamemezela ukuthi umkhankaso wakho uphumelele. Ukufika lapho akulula. Unganqikazi ukucela usizo lochwepheshe ukwakha umkhankaso wakho nokuthuthukisa umdlalo wakho we-SEO.
Tags: isikhundla segama elingukhiyeamazinga wegama elingukhiyeamagama angukhiye omudeukukhula kwe-organici-organic search serpukuhambisanaseo
UBill Acholla ungumthengisi ohamba phambili wedijithali ohlale ekhipha okuqukethwe okubaluleke kakhulu okungasile abantu abanjengawe abangakusebenzisa ukukhulisa ibhizinisi labo, njengale ndatshana. Bheka ibhulogi yakhe yebhizinisi ku- Billacholla.com
Izinselelo Zokumaketha Ezenzekelayo Zabathengisi, Abathengisi, nama-CEO (Idatha + Iseluleko)
Yiziphi Izinhlobo ezi-5 ezijwayelekile kakhulu zokubizelwa ezenzweni?